Da’yarta dembiyada lagu qabt oo dhaqso loo xukumayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Da’yarta dembiyada lagu qabt oo dhaqso loo xukumayo
La daabacay tisdag 22 augusti 2017 kl 16.52
Wasiirka cadaaladda iyo arrimaha gudaha Morgan Johansson. sawir: Vilhelm Stokstad/TT
Maxkamadaynta ka dhanka ah dembiyada qaarkood ee ay geystaan da’yarta ayaa xukumadda ku talo-jirtaa in lagu qabto todbaadyo gudahood, sida ay tabisay TT.
Maanta ayaa kiisaska dembiyo ee aan sidaas u adkayn qaadataa bilo in maxkamad lagu tijaabiyo.
Wasiirka cadaaladda Morgon Johansson ayaa maanta oo talaado ah loo gacan galiyey hindisyaal ku jiray baaritaan la sameeyey oo ujeedadiisa tahay sidii lagu yareyn lahaa waqtiga ay qaadato cinqaab marsiinta da’yarta dembiyada geysta ee 18 sanno da’dooda ka yar tahay.
Sida uu sheegya Stefan Strömberg oo baaritaanka dowladda horey ugu saartay waqtiga ay qaadato cinqaab marinta da’yarta dembilayaasha ah ayaa aad loo gaabinayaa iyada oo laamaha amniga iyo sharci illaalinta qaab cusub arrintan u wajahayaan.
”Waxa ay si gooni ah u quseyn doonta qofka lagu qabto asaga oo fal dembiyeed gacanta kula jira, gaar ahaan dembiyada baritaankooda uusan adkeyn”, sidaas waxaa yeri wasiirka cadaaladda Morgon Johansson oo maanta loo gacan-geliyey talooyin ku jiray baaritaan horey dowladda u dalbatay.
Dembiyadda laga hadlayo ayaa ahaan karo sida xatooyada, dembiyada maandooriyaha, kuwa hubka sharci darada ah sida tooreyda, baabuur wadidda sharci darada ah iyo qof qamri soo cabay oo gaari wada, sida uu yeri wasiirka cadaaaladda Morgan Johansson.
Mashruuc arrintaan quseeya wajigiisa koobaad ayaa dayrtan lagu tijaabinayaa qaybo ka mid ah magaalada Stockholm, sida Täby, Solna iyo Rinkeby.